Sida loo hagaagsan iPad Music Photos Apps Buugaagta iyo Content More in Mac
Waxaan la iPad syncing la iMac ee laba iyo tobankii bilood ee la soo dhaafay. Si kastaba ha ahaatee, haatan doonayaan in ay hagaagsan oo aan MacBook Air. Sidee baan u samayn karaa oo aan laga badinin barnaamijyadooda, xogta iyo buugaagta iwm labada Macs waxaa socda in OS X Libaaxa, iPad ee macruufka 5.1.1. Dhammaan waxaa la socda oo ku saabsan xisaabta isla Lugood.
Your shil Mac keenaa khasaare ah oo xog badan? Hel cusub Mac, laakiin waxba ku yaal? Ha welwelin. Haddii aad u badbaadiseen xogta ku saabsan iPad, aad u hagaagsan kartaa music, videos iyo sawiro ka iPad si Mac effortlessly. All aad samayn shoould waa inuu u jeesto qalab iPad si Mac kala iibsiga caawimaad. Halkan waa xaq ah mid ka mid ah - Wondershare TunesGo (Mac) .
Wondershare TunesGo The (Mac) waxay kuu ogolaanaysaa inaad u hagaagsan oo dhan music iyo playlists la play soo oogay, ratings, qashanka, iwm ka iPad in Lugood ee Mac OS X, oo ay ku jiraan Mavericks, la click fudud oo music u hagaagsan, videos, iyo sawiro ka iPad si Mac . Waxaa gebi ahaanba khatar la'aan, marnaba la tirtiro song, video ama sawir halka iPad syncing la Mac. Oo weliba qalab tani waa gaar ahaan waxtar leh si ay u gudbiyaan heesaha oo aad goolka dad kale ama lagala soo bixi si toos ah internet ka. Raac tallaabooyinka hoose si aad u barato sida loo hagaagsan content iPad si Mac.
Haddii aad leedahay PC Windows ah, isku day in aad ku TunesGo Wondershare (Windows). Waxay wax ka badan sameyn karaan ka badan version Mac ah. Iyada oo ay caawimo, aad u hagaagsan kartaa music files, playlists, videos, sawiro, xiriirada iyo SMS ka iPad in computer Windows.
1. nidaameed Music, Videos, Photos oo ka iPad si Mac
Raac tallaabooyinka hoose si aad u barato sida loo hagaagsan content iPad si Mac. Hadda, rakibi qalab this on your Mac. Markaas, waxa maamula.
Tallaabada 1. Isku iPad in ay Mac via cable USB ah
Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan aad iPad si Mac. Ka dib markii TunesGo Wondershare ah (Mac) ogaadaa aad iPad si guul leh, waxaa soo bandhigaan doonaa iPad uu furmo suuqa laga bilaabo.
Tallaabada 2. nidaameed iPad music, videos iyo sawiro si Mac
Dhammaan songs, videos, iyo sawirro ku saabsan iPad lagu soo bandhigi doonaa Music, Video iyo daaqadaha Photo siday u kala horreeyaan. Dooro files doonayo, guji dhoofinta , dhoofinta ama dhoofinta in Lugood . Waa mid aad u fudud in ay gaarto goolka.
2. nidaameed Lugood Store iibsaday barnaamijyadooda, bandhigyada TV, buugaagta iyo ka badan si Mac
Midig u guji aad iPad hoos Qalabka khaanadda bidix ku Lugood.
Laga soo bilaabo liiska hoos-hoos u, dooro Iibsasho Transfer . Markaas waxa aad ka iibsaday Lugood Store u iPad lagu wareejin doonaa Lugood Library on Mac.
Marka suuqa kala iibsiga la soo gabagabeeyo, xaq guji aad iPad mar dooro Back Up .
Fiiro gaar ah: Ka hor inta aadan u hagaagsan iPad la Mac, fadlan abuurtaan Lugood on your computer Mac. Tag Lugood> rabtid ... , guji Qalabka tab, hubi hortag iPod, iPhone, iPad iyo ka syncing si toos ah.
Tani waxay ku saabsan tahay sida loo hagaagsan content iPad si Mac mini, iMac, MacBook Pro oo MacBook Air marka aad rabto in la dhiso ama dib u dhiska Lugood Library on a computer cusub Mac. By isticmaalayn habka kor ku xusan, ma lumin doonaa oo aan Lugood alaabta iyo heeso iibsaday si toos ah lagala soo bixi internetka ama helay via email.
Daawo Video si ay nidaameed iPad Content si Mac
Isku day TunesGo Wondershare ah (Mac) si ay u hagaagsan iPad songs, videos iyo sawiro si Mac hadda!
> Resource > Mac > Sida loo hagaagsan iPad Content si Mac